Sorona Masina ny 10/04/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 10/04/2021
Salamo 104, 43
Navotan’ny Tompo ny olony ka niravo; navotany ireo voafidiny ka nihoby. Aleloia!
Andriamanitra ô, atosakao ny fahasoavanao hampitombo ny vahoaka mino Anao; mba topazo maso miantra ireto voafidinao, fa efa nateraka indray tamin’ny Sakramentan’ny Batemy izy, ka enga anie hotafianao hasambarana tsy ho faty mandrakizay.
Asa 4, 13-21
Raha izahay dia tsy azonay atao akory ny tsy hilaza izay efa hitanay sy renay.
Tamin’izany andro izany, dia gaga ry zareo mpitondra sy loholona ary mpanora-dalàna nahita itý hasahian’i Piera sy i Joany, satria fantany fa sarambaben’olona sy tsy nahita fianarana izy roa lahy, ary tandriny koa fa olona efa niaraka tamin’i Jesoa izy ireo; nefa tsy hitany izay hanoherany azy ireo noho ilay lehilahy sitrana hitany nitsangana teo akaikin’izy roa lahy. Ka dia nasainy niala teo amin’ny fivoriana aloha izy roa lahy, ary izy ireo kosa niara-nihevitra nanao hoe: “Inona no hataontsika amin’ireo lehilahy ireo? Raha ny fahagagana nataony aloha, dia fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema miharihary izany, ka tsy azontsika lavina; fa mba tsy hielezan’izany intsony amin’ny vahoaka kosa, ndeha horahonantsika izy, mba tsy hiteny amin’izany Anarana izany intsony na amin’iza na amin’iza.” Dia nantsoiny izy ireo ka norarany mafy mba tsy hiteny sy tsy hampianatra amin’ny Anaran’i Jesoa intsony. Fa namaly i Piera sy i Joany ka nanao tamin’izy ireo hoe: “Tsaroanareo raha marina eo imason’Andriamanitra na tsia ny manaiky anareo mihoatra noho an’Andriamanitra; fa raha izahay, dia tsy azonay atao akory ny tsy hilaza izay efa hitanay sy renay.” Tamin’izay, norahonany indray izy ireo, dia nalefany; fa tsy hitany izay hamaizany azy noho ny tahony ny vahoaka, izay efa nankalaza an’Andriamanitra daholo noho ny zavatra vao niseho teo.
Salamo 117, 1 sy 14-15. 16ab-18. 19-21
Fiv.: Misaotra Anao aho, ry Tompo, fa namaly ahy Ianao.
Ataovy antso avo fa tsara ny Tompo. Fa mandrakizay ny fitiavany. Deraiko fa heriko mantsy Izy Tompo. Nanaiky ho Mpamonjy ny aiko. Mihoby sy faly aho fa tra-pamonjena, miantsa ao an-tranon’ny Marina.
Natsotran’ny Tompo ny tanan-kavanany, natsotrany hanampatra ny heriny. Ka indro aho ho velona tsy mba ho faty, hiantsa ny ataon’Andriamanitra. Nitsapa ahy mafy tokoa Izy Tompo, kinanjo aho tsy foiny ho faty.
Vohay ny varavaran’ny fahamarinana, hidirako hisaotra ny Tompo. Fa eto tokoa ny varavaran’ny Tompo. Ny Marina no miditra aminy. Isaorako Ianao, fa mihaino ahy, ry Tompo: nanaiky ho mpamonjy ny aiko.
Mk. 16, 9-15
Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely.
Rahefa nitsangan-ko velona i Jesoa, ny marainakoan’ny andro voalohany amin’ny heninandro, dia i Maria Madelenina, ilay namoahany demony fito, no nisehoany voalohany. Ka lasa io nilaza izany tamin’ireo mpanaraka Azy, izay mbola nalahelo sy nitomany. Nefa nony nandre izy ireo, fa hoe velona indray Izy ka efa hitan-dravehivavy, dia tsy nino izany izy. Manaraka izany, i Jesoa dia niseho tamin’ny endrika hafa tamin’ny roa lahy amin’izy ireo, izay nankany an-tsaha. Dia lasa ireo nilaza tamin’ny namany; fa tsy ninoany koa. Tamin’ny farany dia ny tenan’izy iraika ambin’ny folo lahy no nisehoany teo am-pihinanana indrindra, ka nomeny tsiny noho ny tsy finoany sy ny hamafin’ny fony, satria tsy nino izay nahita Azy tafatsangan-ko velona izy ireo. Ary hoy Izy taminy: “Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voaary rehetra.”
Mihanta aminao izahay, ry Tompo, ataovy velom-pankasitrahana manolotra izao Soron’ny Paka izao: ka enga anie ny asa fanavotana mitohy ankehitriny mba ho loharano hipoiran’ny hafaliana mandrakizay.
Ianareo rehetra natao Batemy ao amin’i Kristy dia mitafy an’i Kristy. Aleloia
Mba topazo maso miantra, ry Tompo, izahay vahoakanao fa sitrakao nohavaozin’ny Kômonio antoky ny fiainan-ko avy, ka enga anie ho tody amin’ilay andro hitsanganan’ny vatana enim-boninahitra tsy ho simba mandrakizay.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0860 s.] - Hanohana anay